Soomaaliya oo raadinaysa hoggaan cusub kadib sanado xasilooni daro ah
Posted On 14-05-2022, 01:59PM
MUQDISHO, Soomaaliya - Soomaaliya waxaa bari oo Axad ah ka dhaceysa doorashada madaxtinimo, iyadoo 15 bilood waqtigeeda dib uga dhacday maadaama jadwalkii hore uu ahaa 8 February, 2021.
Si kastaba ha ahaatee, waa tallaabo wanaagsan, sida ay sheegeen saaxiibada caalamiga ah ee dalka iyo siyaasiyiinta oo u arka hab lagu abuuri karo waxyaabaha aadka loogu baahan yahay.
sharci u ah dib u dhiska dalka ka dib sanado badan oo amni darro ka jirtay.
Soomaaliya ayaa mar kale qabanaysa doorasho dadban. Qorshuhu wuxuu ahaa in markii ugu horreysay muddo 50 sano ah la qabto doorasho qof iyo cod ah, laakiin taasi waa ay dhici wayday iyadoo Farmaajo ku guul daraystay in uu abuuro jawi doorasho oo amaan ah, sharci doorasho iyo mid maaliyadeedba oo ay eheyd in uu bilaabo doorashada ka hor.
Soomaaliya waxa ay u baahneyd dastuur siinaya hannaan sharci oo ku saabsan doorashada iyo codeynta. Balse waxaa ku fashilantay dowladda uu hoggaamiye Farmaajo.
Taa beddelkeeda, mas’uuliyiinta ayaa dib ugu laabtay doorashooyin dadban oo ay xildhibaannada Aqalka Sare iyo Aqalka Hoose ay si wadajir ah u wada fariisanayaan si ay cod qarsoodi ah ugu doortaan madaxweyne.
Aqalka sare ayaa gaaraya 54 mudane halka Aqalka Hoose uu ka yahay 275 mudane. Xildhibaanadan waxaa soo doortay ergo gaar ah oo si gaar ah loo soo xulay mid kasta oo ka mid ah shanta dowlad goboleed ee federaalka ah, iyadoo lagu saleeyay hab qabiil oo dheellitiran.
Doorashadan ayaa soo jiidatay dadkii ugu badnaa taariikhda Soomaaliya. Sida ku cad liis ay shaaciyeen guddiga u xilsaaran doorashada madaxweynaha Soomaaliya, 39 musharrax ayaa la siiyay shahaadada ka qayb galka tartanka doorashada. Hal qof oo dumar ah ayaa tartanka ku jirta.
Musharixiinta is diiwaangaliyay ayaa ka soo jeedaan qabiillada ugu waaweyn Soomaaliya: Hawiye, Daarood, Dir, iyo Digit & Mirifle, oo sidoo kale loo yaqaano Raxanweyn.
Inta badan tartamayaasha ayaa ku cusub tartanka balse waxaa ku jira siyaasiyiin ruug cadaa ah. Madaxweynaha hadda xilka haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa raadinaya in uu kursigiisa ka difaacdo Madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo Madaxweyne ahaa intii u dhaxeysay 2009 ilaa 2012.
Xubnaha kale ee sida weyn loolan adag ugu jira waxaa ka mid ah Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni; Xasan Cali Khayre, Ra’iisul Wasaarihii Farmaajo ilaa July 2020; iyo C/shakuur C/raxmaan Warsame oo horay u ahaa Wasiirkii Qorsheynta iyo nin aad u dhaliila Farmaajo.
Sidoo kale waxaa tartanka ku jira Fawsiya Yuusuf Aadam oo horay u soo noqotay wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud iyo haweeneyda kaliya ee la tartamaysa; iyo sidoo kale Cabdulqaadir Cosoble oo horey u ahaa guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka.
Guddiga doorashada madaxweynaha ayaa shaaciyay liiska 39 musharax. Waxaana mid kasta oo ka mid ah musharixiintan uu bixiyay lacag dhan $40,000 si uu ugu tartamo. Midkoodna kuma dadaalin sidii uu lacagta caddaanka ah u ururin lahaa, taas oo muujinaysay ujeeddada iyo hantida dadka tartamaya labadaba.
Dadka dhaleeceeya ayaa, si kastaba ha ahaatee, ku dooday in kharashka badan ee tartanka uu qufulayo qaar ka mid ah musharaxiinta u qalma xilka madaxweynaha. Laakin qabanqaabiyaasha doorashada ayaa sheegay in ay hayaan qarashka uu ka jaban yahay tii 2017 markaas oo ay ku kacday $50,000 in lagu galo tartanka.
Waa maxay xeerarku?
Marka laga reebo kharashka diiwaangelinta, musharraxiinta waxaa loo sheegay inay marka hore ka helaan ansixinta ugu yaraan 20 sharci-dejiyayaal. Tani sidoo kale waa tirada ugu yar ee codadka loo baahan yahay si uu ugu sii jiro tartanka wareegga koowaad ee Axadda.
Musharixiinta waa in ay sidoo kale ahaadaan Muslimiin, muwaadiniin Soomaaliyeed oo da'doodu tahay 40 ama ka weyn, oo ay maskaxdoodu fayoowdahay. Si kastaba ha ahaatee, musharaxa ayaa laga yaabaa inuu haysto jinsiyado badan.
Farmaajo oo hadda xilka haya ayaa la doortay isagoo heysta dhalashada Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, 2019, wuxuu ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay.
Musharixiinta is diiwaan galiyay ayaa khudbado ka jeediyay fadhiga baarlamaanka. Mid kaste waxaa la siiyay 15 daqiiqo si uu fikradihiisa u soo bandhigo oo uu u sharaxo sababta ay tahay in loogu codeeyo.
Maalinta Codbixinta, 329 sharci-dejiyeyaasha ayaa mid kasta yeelan doona hal cod. Musharaxa ayaa ku guuleysan kara doorasho toos ah haddii uu helo 75 boqolkiiba codadka wareega koowaad. Si kastaba ha ahaatee, tani weligeed kamay dhicin Soomaaliya oo doorashooyinku waxay si caadi ah u dhacaan saddex wareeg.
2017, Farmaajo iyo Xasan Sheekh ayaa qoorta isku galay wareegii saddexaad, ka hor inta uusan kan dambe qirin in laga adkaaday. Haddii aan qofna helin codadka aqlabiyadda ah ee wareegga koowaad, doorashada ayaa lagu celin doonaa shuruudo la mid ah, marka laga reebo in musharrixiinta ku guul dareysata in ay helaan 20 cod iyo wax ka badan laga saari doono wareeggan.
Haddii qofna uusan helin tirada codadka loo baahan yahay, tartanka wuxuu geli karaa wareegga saddexaad halkaas oo qofka ku guuleysta, oo u dhexeeya musharraxiinta ugu dhibcaha badan iyo labaad, lagu dhawaaqo aqlabiyad fudud.
Waa maxay fursadaha musharixiinta?
Ugu horrayn, doorashadii dadban ee Soomaaliya ee la soo dhaafay waxay keentay wax lala yaabo. Ma jiro masuul difaacday kursigiisa dhammaan doorashooyinkii dadban ee dhowaan dhacay, doorasho kasta oo cusub waxaa la dooranayay mid cusub oo madaxweyne ah.
Maanta, sidii hore, qodobbada ku soo baxay guulwadayaashu waa isku mid: isku xirka qabiilka, muruq dhaqaale iyo shabakado xooggan oo ka dhex jira ergada wax dooranaysa ama sharci dejinta.
Iyadoo laga duulayo in Farmaajo, Xasan Maxamuud, Sheekh Shariif, Deni iyo Khayre ay ku gudbi karaan wareegga koowaad balse midkoodna lama xaqiijin karo guushiisa.
Marka labaad, awoodda lagu qancinayo tartamayaasha inay ka tanaasulaan tartanka oo ay taageeraan musharaxa ugu codadka badan ayaa door weyn ka ciyaari kara. Sidii horeba u dhacday ayaa la filayaa in musharixiinta qaar ay tanaasulaan xitaa ka hor inta aysan tagin howlka doorashada.
Sidoo kale, musharixiinta hal beel ka soo wada jeeda ayaa si joogta ah u heshiiya, haddii ay gartaan in ay ku kala baxayaan codadka ama haddii ay is qabtaan. 2017, Xasan Sheekh iyo Shariif oo labaduba ka soo jeeda beesha Hawiye, ayaa ku kala baxay codadka, taasoo u sahashay inuu helo Farmaajo oo ka soo jeeda beesha Daarood.
Markan, loolanka Farmaajo isaga u gaar ah ayaa loolan adag kala kulmaya Siciid Deni oo isna kasoo jeeda beesha Daarood. Faa'iidada ugu horreysa ee Deni ayaa ah in uu soo xushay sharci-dejiyaal ka socda Puntland, isaga oo si taxadar leh meesha uga saaray dadkii loo maleynayay in ay ka soo horjeedaan.
Kadib markii xildhibaanada la doortay ayuu ku dhawaaqay inuu danaynayo kursiga ugu sareeya inkastoo oo uu xoogaan dhaliil ah kala kulmay. Deni ayaa sidoo kale ku tiirsan xildhibaanada Jubbaland maadaama ay saaxiib siyaasadeed yihii Axmed Madoobe hoggaamiyaha Jubaland.
Farmaajo, si kastaba ha ahaatee, wuxuu weli ku raaxaysanayaa dabinka awoodda iyo xiriirka saaxiibada dibadda, kuwaas oo laga yaabo in ay ka caawiyaan ololihiisa Doorashada.
Dhibka ugu weyn ayaa ah in musharixiinta ay la kulmi karaan jaanisyo hoose haddii ay ka soo jeedaan beelo horey u qabsaday guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka. Sida dhaqanku yahay, isku dheelitirka qabiilku waxa uu ka dhigan yahay sharci-dejin iyo fulintu in aanay isku beel madax ka noqon karin, inkasta oo aanay sharci ahayn.
Maxay sheegayaan musharaxiinta?
Farmaajo ayaa sheegay in uu doonayo in uu sii hayo xilka Madaxtinimada iyo hagaajinta Hay’adaha dalka.
"Waxaan diyaar u ahay inaan sii wado oo aan dhamaystiro safarka isbeddelka socda ee dalkeenna hooyo anigoo u dhiibaya walaalaheyga afar sano oo kale," ayuu yiri ka dib markii uu isku soo sharaxay tartanka. Waxa uu sheegay in uu hirgeliyay "dib u habeyn ballaaran" intii uu xilka hayay, inkastoo kuwa ka soo horjeeda ay diideen sifadaas.
Deni waxa uu xukunka Farmaajo ku tilmaamay “Siyaasad hore u fashilantay oo is-diidan.” Barnaamijkiisii la faafiyey, wuxuu wacad ku maray inuu dhisi doono Soomaaliya “oo leh dowlad ku shaqeysa xudduudaha dastuurkeena iyo qaab dhismeedka federaalka, kana saara shacabka Soomaaliyeed faqriga iyo kala qaybsanaanta.
Xubnaha kale ee la tartamaya ayaa Farmaajo ku eedeeyay inuu ku guul darreystay inuu ka takhaluso Al-Shabaab, musuqmaasuqa baxsadka ah iyo dulqaad la’aanta. “Farmaajo waxa uu ballan qaaday in Al-Shabaab laga ciribtiri doono Soomaaliya labo sano oo kaliya markii uu xafiiska la wareegay 2017.
Waxa uu sidoo kale ballan qaaday dhibanayaasha argagixisada in dowladdiisa ay si degdeg ah magdhow u siin doonto. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay caddaysay ballan kale oo fashilantay” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud, oo ah madaxweynihii ka horreeyay.
Shariif Sheekh Axmed oo loo aaneynayo jabkii ugu horeeyay ee Al-Shabaab ka soo gaaray caasimadda Muqdisho, ayaa sheegay in dowladdu ay la safatay kooxaha argagaxisada ah oo ay ka mid yihiin dacaayado ay faafinayaan, arrintaas oo uu ku doodayo in hay’adaha dowladda ay ka dhigeen kuwa u jilicsan argagixisada.